'लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने पार्टी भनेको कांग्रेस हो,त्यसमा कुनै दुईमत छैन,मेरो जित निश्चित छ' - Top Nepal News
‘लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने पार्टी भनेको कांग्रेस हो,त्यसमा कुनै दुईमत छैन,मेरो जित निश्चित छ’
मंसिर ११, २०७४ मा प्रकाशित
नेपाली काग्रेंसका नेता तथा पुर्व दोधारा गाबिस अध्यक्ष बेल बहादुर राना कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ (ख) प्रदेश सभाका काग्रेंसका उम्मेदवार हुन् । २०५४ सालमा राना दोधारा गाबिसका अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् । त्यस्तै उनी २०४९ सालमा क्षेत्रपालमा निर्वाचित भएका थिए । राना २०५७ सालमा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कार्य समिति कञ्चनपुरको सदस्य समेत भए । युवा उमेर देखि राजनितिक क्षेत्रमा होमिएका बताउने उम्मेदवार राना राजनीति मार्फत समाज सेवा गर्नका लागि अहिले मतदाताको घर घरमा पुगेर समर्थन खोजेका छन् ।
विगतमा गाविस अध्यक्ष रहदा इमान्दारिताका साथ काम गरेको रानाले जनताको सेवा नै आफ्नो जितको आधार रहेको बताँउदै आएका छन् । आगामी दिनमा पनि जनताकै सेवामा आफूलाई समर्पित गराउने उनको दृढ इच्छा रहेको छ । आफुले चुनाव जिते पक्की सडक, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, आरक्ष पिडितको समस्या र ग्रामीण सडक सञ्जाल कालोपत्रे गर्ने बिशेष योजना रहेको बताँउदै आएका छन् । प्रस्तुत छ आसन्न निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित रहेर कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ (ख) प्रदेश सभाका नेपाली काग्रेंसका उम्मेदवार बेल बहादुर राना संग पत्रकार पप्पु गुरुङ्गले गरिएको कुराकानीः –
चुनाव नजिकिएसँगै कत्तिको व्यस्त हुनुहुन्छ ? स्वभाविक रुपमा, अहिले धेरै व्यस्तता बढेको छ । नेपाली काग्रेंसका तर्फ देखि कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ (ख) प्रदेश सभा उम्मेदवारी पाएपछि जनताको समस्या बुझन प्रत्येक जनताको घरमा पुग्दै छु । विहानै निस्केको राती अबेर सम्म जनताकै घर दैलोमा हुन्छु । कतै भेटघाट, कतै छलफल अनि भेला तथा सभाहरुले व्यस्तता बढाएको छ । पार्टीले विश्वास गरेर खटाइसकेपछि त्यसै बस्न पनि भएन । म पनि जनताको सेवा गर्न ज्यादै इच्छुक मान्छे । त्यहि भएर जनताको समस्या सुन्न म घर घर नै गईरहेको छु । यसैमा समय वितिरहेको छ, फुर्सद छैन व्यस्त नै छु ।
तपाईको चुनावी एजेण्डा के के छन् ?
मैले भन्ने एउटै कुरा हो । यहाँ जति पनि उम्मेदवार छन् त्यस मध्ये राम्रोलाई छान्नु होला । इमान्दारलाई भोट दिनुस् । पैसाको लोभमा नलाग्नुहोस् । भोट किन बेचमा लाग्नुभयो भने फेरी तपाई हाम्रो भविष्य अन्धकारमा वित्छ । अबको समय भनेको समृृद्धि र विकास हो । त्यसैले मलाई नै भोट दिनुस भन्दिन् तर इमान्दार र राम्रो छान्नुस्, भन्ने गरेको छु । साथ साथै मेरो आफ्नो एजेण्डा कै कुरा गर्नु पर्दा कञ्चनपुर क्षेत्रलाई समुद्ध बनाउने हो ।
नेपाली काग्रेंसले बिगतका दिनहरुमा महाकाली नगरपालिका लगायत कञ्चनपुरलाई समृद्धि तिर लाने काम गरेको छ । साथै पार्टीले विकास निमार्णका कामलाई समेत प्राथिमकताका साथ अगाडि बढाँउदै आएको छ । महाकाली नगरपालिका लगाएत क्षेत्रमा नेपाली काग्रेंसले गरेको काम सबै माझ छर्लङ्ग छ । नेपाली काग्रेंसले जे बोल्यो अझै सम्म त्यही काम गर्दै आएको छ । अरु दल जस्तो झुटोको खेती गर्ने हाम्रो पार्टी हैन । महाकाली नदी, जगबुडा नदी नियन्त्रण, महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल, सुख्खा बन्दरगाहा, माहाकालीमा ४ लेनको पक्की पुल लगाएत थुप्रै राम्रा यस क्षेत्रलाई सुधार गर्ने र सर्वसुलभ र सहज बनाउने नै मेरो प्रमुख एजेण्डा हो ।
तपाईलाई मतदाताले भोट किन दिने ?
‘मेरो इमान्दारीता र मैले विगतमा गरेको सेवा नै,’ मलाई विश्वास गर्ने आधार हुन् । २०५४ सालमा दोधारा गाबिसका अध्यक्ष पदमा विजय भए । मैले गाविस अध्यक्ष हुदा तत्काल शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामिण सडक र नदी नियन्त्रणमा प्राथमिकता दिए । त्यो बेलाको बजेटको अनुपातमा थोरै भएपनि उदाहरणीय कार्य गर्न सके । फुसका छाना भएका माहाकाली नगरपालिकाका विद्यालयलाई पक्की बनाउने, कच्ची सडकलाई ग्राईबेल गर्ने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र महाकाली र जोगबुडा नदी नियन्त्रणको कार्यमा मेरो योगदान रहेको छ । त्यसैले मैले सेवा गर्नका लागि कुनै एक निश्चित स्थानमा बसेर हुदैन भनेर राजनीतिमा होमिएको छु । जसबाट म जनताको घर घरमा पुगेर सेवा गर्न सक्छु । ‘सेवकलाई रोज्ने कि शोसकलाई त्यो जनताकै हातमा छ ,’ म त सधै सेवक बनेर काम गर्न चाहन्छु ।
घर दैलोमा जाँदा मतदाता के भन्छन ? तपाई सामु मतदाताले के कस्ता मागहरु राखे ? जनताहरुको पहिलो प्राथमिकता वा माग भनेको सडक बाटो नै रहेको छ । साह्ै असहज भो बाटो भत्केर भन्छन् । महाकाली नगरपािलका लगायतका क्षेत्रमा कच्ची सडक नै छ । कतिपय स्थानमा नेपाली काग्रेंसको पहलमा पक्की सडक निमार्ण भएको छ भने, कतिपय स्थानमा निमार्ण क्रम जारी छ । अझै थुप्रै स्थानमा पिच सडक बनाउनु पर्ने अवस्था छ । विद्यालय, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरु पनि गर्छन । अहिले पनि जनतामा धेरै समस्या रहेको देखेको छु । अझै पनि झुप्रोमा जिन्दगी विताउनु पर्ने कठिन र संघर्षमय अवस्थामा थुप्रै बस्ती रहेका छन् । गाँउ, बस्तीमा घुम्दा धेरै अनुभव बटुल्न पाएको छु । जनताको समस्या प्रत्यक्ष र्हेर्न पाएको छु । सडकका साथसाथै रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुराहरु नै पहिलो प्राथमिकतामा पाएको छु । मैले प्रतिज्ञा गरिसकेको छु,म जितु या हारु अबको मेरो समय भनेको जनताको सेवामा वित्छ । त्यसैमा म लागिरहेको छु ।
मुलुकमा वामगठबन्धन भएको छ, यस्तोमा तपाई निर्वाचनमा होमिनु भएको छ , चुनाव जित्छु जस्तो लागेको छ ? मलाई ,चुनाव चित्न सहज छ । को कहाँ, के छन् भन्ने मलाई थाहा छैन । यहाँका जनताले राम्रो संग बुझेका छन् । वामगठबन्धनका उम्मेदवारहरु जनताको नजरबाट उनीहरु ‘फेलियर’ भईसकेका छन् । अब उनीहरुबाट केहि हुनेवाला छैन भन्नेमा जनता ढुक्क छन् । दुर्गम क्षेत्रमा रहेका आमजनताले कहिल्यै अधिकार पाएनन् । मुस्लिम, अल्पसंख्यक, थारु, जनजाति लगाएत अहिले जो जसलाई अधिकार सम्पन्न गराइएको छ त्यो सबै काग्रेंसको देन हो ।
त्यसमाथि अहिले एमाले र माओवादी मिलेर हामी जनताको घरघरमा पुगिरहेका छन् उनीहरुलाई आमजनताले चिनिसकेका छन् कि कहिले एउटा पार्टीमा जाने कहिले अर्को पार्टीमा जाने त्यस्ता विश्वास नभएका उम्मेदवारहरुलाई जनताले विश्वास गर्ने कुरै भएन् । जनताले स्पष्ट भनेका छन्,दल बदल्ने नेताहरुलाई हामी भोट दिन्नौ ।
म युवाअवस्था देखि काग्रेंसमा रहेर गाँउ बस्तीमा जनताको पिरमर्का नजिकैबाट हेर्दै आएको छु । काग्रेंसको लोकतन्त्रको नारालाई जनताले बुझेका छन् । मेरो इमान्दारीता नै मेरो जितकोे आधार हो । मैले समाजमा गरेको सेवा, मेरो लगनशीलता यहि नै , मेरो जितको आधार पनि ।
निर्वाचन नजिकिदै जाँदा प्रचार प्रसार र निर्वाचनका लागि जनताको सहयोग कत्तिको पाउनु भएको छ ?
काग्रेंसलाई जनताले बढी विश्वास गर्दै आएका छन् । जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ता सबैको सल्लाहमा नै आफुहरु प्रचारमा लागेका छौं । महाकाली नगर क्षेत्र लगायतका स्थानमा काग्रेंसका उम्मेदवारलाई जिताउने लहर नै चलेको छ । हाम्रो सम्मानिय नेता पुर्व मन्त्री रमेश लेखक नेपाली काग्रेंसको तर्फ देखि कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । यसमा आमजनताबाट मैले राम्रो सहयोग पाईरहेको छु । समृद्ध गर्ने अभियानमा लागेकाले नेपाली काग्रेंसको जित निश्चित छ , मेरो जित निश्चित छ ।
यदि चुनाव जित्नु भयो ,तर चुनाव जितेर शहरतिर हराउने चलन प्रशस्त छ,तपाई पनि त्यही परम्पराको पछि लागेर हराउने हो कि ?
हैन, विल्कुललै होईन् । यहाँलाई जानकारी गराउन चाहान्छु, मेरो घर माहाकाली नगरपालिका वडा नं. ७ मा हो । सानै देखि म यही माटोमा हुर्के अब बुढेसकाल लाग्न थाल्यो । जितेर,म कहाँ हराउला र ? म सधै जनताकै सेवामा तल्लिन हुने मान्छे । कहिल्यै पनि सोच्दिन कि जनताबाट टाढा जाउ । मलाई राजनीतिबाट निस्वार्थ सेवा बाहेक हरु केहि कमाउनु छैन । मैले परिवार चलाउनको लागि, आफनै मेहनत र पसिनाबाट कमाएको छु । म एउटा सामान्य घरको मान्छे । मैले कमाएर अब छोरालाई दिनु छैन् । छोराछोरी सबै कमाउने भईसकेका छन् । विशुद्ध रुपमा सेवा गर्न नै म यो राजनीतिमा लागेको हँु । अरु जस्तो राजनीति बाटै रोजिरोटी चलाउन म यसमा लागेको होइन । राजनीति भनेको समाज सेवा हो । बालबच्चाका लागि जम्मा गर्ने भन्ने अब मलाई छैन् । मलाई जनताको सेवा गर्नु छ ।
यो नै सबै भन्दा ठुलो सेवा हो, जुन जनताको घर दैलोमा पुगेर उहाँहरुको दुख सुखमा साथ दिनु हो । त्यहि भएर अहिले म मेरो ठाँउका जनताको सेवामा तल्लिन हुन राजनीति रोजेको हुँ । यो पनि एउटा तपस्या हो । जनताको सेवा गर्न पाउनु हजारौ गुणा पुण्यको काम हो । त्यसैले म यता आएको हु र सधै उहाँहरुकै साथमा हुने छु । कहि जाने वा हराउने भन्ने कुरै आउदैन् । पहिलाका नेताले अंगालेको नराम्रो बाटो मैले कहिले आत्मसाथ गर्ने छैन, यो कुरामा जनता निसन्देह बसे हुन्छ ।
लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने पार्टी भनेको कांग्रेस हो, त्यसमा कुनै दुईमत छैन । त्यही पार्टीमा बसेर म मेरो आफनो क्षेत्रको जनताको विकास र समृद्धिको चाहना राखेको छु ,त्यसैले जनताले मलाई साथ दिनेमा म ढुक्क रहेको छु । मेरो जित निश्चित छ ।